ရွာသားရဲ့ပြောပြချက်အရ အမှန်တော့ အဲဒီတွင်းထဲမှာ မြွေတွေ ကင်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ အကြောင်းနဲ့သူအကိုက်မခံရတာပင် အ့ံဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပဲတဲ့။ ဒါနဲ့ သူလည်းအိမ်မပြန်ရဲတော့ဘဲ အိမ်ပြေးဘဝရောက်လာပြီး ဗိုက်ဆာတဲ့အခါ အမှိုက်ပုံတွေနားသွားပြီး အစာရှာစားတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့တော့ လူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး သူ့ကိုအိမ်ခေါ်ထမင်းကျွေး၊ဆံပင်တွေညှပ်ပေးပြီး ဘယ်လိုသန့်ရှင်းအောင်ဝတ်ဆင်ရမလဲ ဆိုတာပြောပြပြီး အလုပ်ရှာပေးမယ့်အကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။
အမှန်တော့ဒီလူကြီးဟာ ဒီကလေးငယ်ကို လိင်တူဆက်ဆံတဲ့အလုပ်ကိုအဓမ္မခိုင်းစေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ယောကျာင်္းပေါင်းများစွာနဲ့သူအိပ်ရတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျလွန်းလို့ မူးယစ်ဆေးတွေစတင်သုံးစွဲလာခဲ့တယ်။ သေကြောင်း
ကြံတာလည်းအကြိမ်ကြိမ်ပဲ။ သူ့ဘဝဟာအမှောင်ထဲမှာနက်သထက်နက်လာတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့တစ်နေမှာတော့ လူတစ်ယောက်အားဖြင့်ဘုရားမေတ္တာကိုသူကြားသိခဲ့ရတယ်။ သူ့ဘဝကိုယေရှုဆီအပ်နှံလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး သူ့ဘဝအမှောင်ထဲကနေလွတ်မြောက်လာပြီး ဘဝအသစ်ကိုသူရရှိခဲ့တယ်။ သူဟာခရစ်တော်၌လူသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဘဝအသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်လာတယ်။ အခုအချိန်မှာ သူဟာ လိင်တူဆက်ဆံတဲ့ သူ့လိုဘဝတူတွေဆီမှာ ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုပြန်လည်ဝေငှနေသူဖြစ်လာပါတယ်။
မာရ်နတ်ဟာ သူ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးလို့ရသမျှဖျက်ဆီးတာဖြစ်ပေမယ့် ဘုရားသခင်က သူ့ကိုပြန်ကယ်တင်ကာ မာရ်နတ်ဖျက်ဆီးနေတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကို သူ့လက်နဲ့ပြန်လွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်ဟာ ကလဲ့စားချေတဲ့ အခါ မှာလည်း တရားမျှတပါတယ်။ မာရ်နတ်ဟာခိုးဖို့သတ်ဖို့ဖျက်ဆီးဖို့လာတယ်။ ယေရှုကတော့အသက်လွတ်ဖို့နဲ့ ကောင်းစားကြွယ်ဝတဲ့ဘဝကိုပေးဖို့ဒီလောကကိုလာခဲ့တယ်။ဒီကနေ့သင့်ဘဝအမှောင်တွေကုန်ဆုံးပြီး အလင်းနေ့ရက် သစ်ထဲကို လာခဲ့ဖို့ ယေရှုဘုရားကဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ သင့်ဘဝကို ဆုံးရှုံးမှုတွေထဲကနေ အောင်မြင်တဲ့နေ့ရက်သစ်ဆီကို ခေါ်ဆောင်လမ်းပြပေးလိမ့်မယ်။ ထိုအရှင်ကို လက်ခံလိုက်ပါ။ သင့်လိုရှုံးနှိမ့်မှုတွေထဲမှာ လဲကျနေသူ တွေများစွာ ပြန်ထလာကြလိမ့်မယ်။ သင့်ကိုသူတို့စောင့်နေတယ်...။
မိက္ခာရ:၈ "အချင်းရန်သူ၊ ငါ့အပေါ်မှာ ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်း မရှိနှင့်။ ငါလဲသော်လည်း ထဦးမည်။ မှောင်မိုက်၌ ထိုင်ရသော်လည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါ၏အလင်းဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်။"
ဟေရှာယ ၆၀:၁ "သင်ထလော့၊၊ လင်းလော့၊၊ သင်၏အလင်းရောက်လာပြီ၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန်းတော်သည် သင်၏အပေါ်မှာ ပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏၊၊
"လုကာ၄:၁၈-၁၉ "ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့အပေါ်၌တည်တော်မူ၏။ အကြောင်း မူကား၊ ဆင်းရဲသား တို့အားဝမ်းမြောက်စရာ သိတင်းကိုကြားပြောစေခြင်း ငှါငါ့ကိုဘိသိက်ပေးတော်မူပြီ။ ကြေမွသော သူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်း ငှါ၄င်း၊ ဘမ်းသွားချုပ်ထား လျက်ရှိသော သူတို့အားလွှတ်ခြင်း အကြောင်းနှင့် မျက်စိကန်းသောသူတို့အား မျက်စိမြင်ပြန်ခြင်း အကြောင်း ကိုပြစေခြင်း ငှါ၄င်း၊ ညှင်းဆဲခံရသောသူတို့ကို ကယ်မစေခြင်း ငှါ၄င်း၊ ထာဝရဘုရား၏ မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြား ပြောစေခြင်း ငှါ၄င်း၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီး ဟုလာသတည်း။"
By Rev. Mang Uap (July 02, 2016)
Tags: Author Rev. Mang Uap